मूल्य उतारचढावबाट बच्न अप्शन बजार | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण मूल्य उतारचढावबाट बच्न अप्शन बजार
on: २७ श्रावण २०७५, आईतवार ०६:२० लेख | दृष्टिकोण
मूल्य उतारचढावबाट बच्न अप्शन बजार
डेरिभेटिभ बजारअन्तर्गत ‘अप्शन बजार’मा अप्शन खरीद गर्नु भनेको बीमा कम्पनीबाट बीमा पोलिसी खरीद गर्नुजस्तै हो । जस्तै कुनै मोटरधनीले आफ्नो मोटरमा भविष्यमा हुन सक्ने जोखीमका लागि बीमा गराउँछ । एउटा किसानले आप्mनो पशु र बालीमा गरेको लगानीको जोखीम लिन नचाहेर केही थोरै प्रिमियम तिरेर पशु तथा बालीको बीमा गराउँछ । यहाँसम्म कि बैङ्कहरूले सुन धितो कर्जामा आफूले आफ्नै ढुकुटीमा राखेको सुनमा पनि भविष्यमा जोखीम हुन सक्ने भन्दै बीमा गराएका हुन्छन् । तर, शेयरबजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विनाग्यारेण्टी यतिका धेरै पैसा के आधारमा लगानी गरिरहेका छौं त ? त्यसैले संसारभरि फ्यूचर बजारको कन्सेप्ट विकास गरिएको छ । हरेक लागनीकर्ताले भविष्यमा आफ्नो सम्पत्तिमा पर्न सक्ने जोखीमलाई कुनै न कुनै रूपले अर्को पक्षलाई नै हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । अप्शन बजार भनेको शेयरबजारमा हुने अनावश्यक उतारचढावबाट उत्पन्न हुने ‘जोखीम’को नै किनबेच गर्ने बजार हो । शेयरबजारमा कारोबार भएको कुनै पनि शेयरको कुनै पनि मूल्यमा जति जोखीम हुन्छ, त्यस आधारमा नै त्यस मूल्यको प्रिमियम मूल्य तयार गरिएको हुन्छ । विकसित मुलुकहरूको शेयरबजारमा शेयर र शेयर अप्शन भनेर सँगसँगै कारोबार गरिन्छ । अप्शन बजारमा ‘कल अप्शन’ र ‘पुट अप्शन’ गरेर दुईथरीको अप्शन हुन्छ । जसले शेयरबजारमा शेयर खरीद गर्छ उसले त्यो शेयरबाट हुनसक्ने घाटाका लागि थोरै प्रिमियम तिरेर त्यही मूल्यको ‘पुट अप्शन’ खरीद गर्न सक्छ । यसो गर्दा आफूले किनेको शेयरको मूल्य भविष्यमा घटेर घाटा पर्‍यो भने त्यो घाटालाई आफूले खरीद गरेको पुट अप्शनले विस्थापित गर्नेछ । यसरी शेयरबजारमा जोखीम लिन नचाहने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मुनाफा पक्का गर्न सक्छ ।
शेयरबजारमा हुने गिरावटबाट अप्शनले कसरी बचाउँछ त ? जस्तै : भविष्यमा मूल्य बढ्ला भन्ने आशमा आज कुनै व्यक्तिले नबिल बैङ्कको १ हजार कित्ता शेयर रू. १०००।– का दरले खरीद गर्छ भने उसले त्यो लगानीको जोखीम हटाउन अप्शन बजारमा नबिल बैङ्कको ‘पुट अप्शन’ खरीद गर्न सक्छ । जुन ‘पुट’का लागि उसले प्रतिकित्ता लगभग रू. १५ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब उसको नबिल बैङ्कको मूल्य केही समयपछि ११ सय, १२ सय, १३ सयजति पुग्छ नाफा हुँदा सबै नाफा उसको नै हुन्छ । तर, उसले सोचे जस्तो नभएर शेयरको भाउ ९ सय, ८ सय, ७ सयजति तल झरे पनि उसलाई केही फरक पर्दैन । जति तल झरे पनि उसलाई परेको घाटा उसलाई उसले खरीद गरेको पुट अप्शनले घाटा हुनबाट जोगाउँछ । त्यस्तै यदि कुनै व्यक्तिले भविष्यमा मूल्य घट्न सक्छ भन्ने डरले आज नबिल बैङ्कको शेयर रू. १०००।— को दरले १ हजार कित्ता शेयर विक्री गर्‍यो भने अब भविष्यमा मूल्य घट्नुको साटो बढ्यो भने त उसलाई फेरि घाटा हुन सक्छ किनकि उसले त कम मूल्यमा नै बेचेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि उसले शेयर बेचिसकेपछि त्यही दिन त्यही मूल्यवाला कल अप्शन खरीद गर्न सक्छ । जसको प्रिमियम मूल्य लगभग रू. १५ पर्ने हुन्छ । यसकारण उसले रू. १५ह१०००. रू. १५,००० लगानी गरी कल अप्शन खरीद गरेपछि भविष्यमा ती कम्पनीको मूल्य ११ सय, १२ सय, १३ सय जति नै पुगे पनि उसलाई त्यही उच्चतम मूल्य नै प्राप्त हुन्छ जबकी पहिला उसले १ हजारमा नै बेचेको किन नहोस् । १ हजारभन्दा माथि जति बढी रकम आउँछ त्यो उसलाई उसले खरीद गरेको कल अप्शनबाट रिकभर हुने हो । यसरी अप्शनबजारमा अप्शनखरीदकर्तालाई क्यास बजारमा शेयर किनबेच जे गर्दा पनि भविष्यमा हुन सक्ने हानिनोक्सानीको भर्पाई गराउँछ । अप्शन बजारमा अप्शनप्याकहरू १ महीना, २ महीना ३ महीना गरी विभिन्न समय तोकेर खोलिएको हुन्छ १ महीनावाला अप्शनको प्रिमियम मूल्य निकै सस्तो हुन्छ भने ३ महीनावाला अप्शनको प्रिमियम मूल्य अलि बढी हुन्छ । अप्शन बजारमा कुनै पनि शेयरको २०/२० रुपैयाँको फरकमा विभिन्न प्रिमियम मूल्य तोकिएको हुन्छ । शेयरको मूल्यमा जतिजति उतारचढाव आउँछ प्रिमियमको मूल्यमा पनि त्यतित्यति उतारचढाव आउन थाल्छ । आज १५ प्रिमियम तिरेको कुनै १ हजार पर्ने शेयरको मूल्य १ हजारबाट बढेर ११ सय भयो भने कल अप्शनको प्रिमियम मूल्य पनि १५ बाट बढेर ११५ पुग्छ । यसरी शेयरको मूल्य जति धेरै बढ्यो त्यही अनुपातमा प्रिमियमको मूल्य बढी हुन्छ र कल खरीदकर्तालाई फाइदा हुन्छ । शेयरको मूल्य १ हजारबाट घटेर ९ सयमा आयो भने पुट अप्शनको प्रिमियम मूल्य रू. १५ बाट बढेर ११५ पुग्छ जसकारण पुट वायरलाई फाइदा हुन्छ ।
बजार माथि जान्छ भन्ने अनुमानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कल वायर र बजार तल जान्छ भन्ने आनुमानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पुट वायर भनिन्छ । शेयरबजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई जोखीममुक्त गर्न अप्शन बजारमा लगानी गर्छन् ।
जोखीममा खेल्न नचाहने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ शेयरबजारका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा भएको आफ्नो लगानीको जोखीमलाई समेत न्यूनीकरण गर्न अप्शन बजारमा पनि लगानी गर्न सक्छन् । चलाख लगानीकर्ताले चाहिँ प्रायः अप्शन वायरभन्दा अप्शन सेलर नै भएर काम गर्छन् । यिनीहरूले धेरै विचार गरी सावधानीपूर्व बजारको गहन अध्ययन गरेर अप्शन सेल गर्छन् ।
अप्शन वायरलाई घाटा भएमा घाटा सीमित (थोरै) हुन्छ भने नाफा भएमा असीमित (जति धेरै) पनि हुन सक्छ । त्यस्तै अप्शन सेलरलाई नाफा भएमा सीमित (थोरै) र घाटा भएमा असीमित (जति धेरै) पनि हुन सक्छ । त्यसैले सामान्यतया अप्शन बजारमा मात्रै लगानी गर्ने साधारण लगानीकर्ताले अप्शन सेलरभन्दा अप्शन वायर भएर नै लगानी गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ ।
कल वायेरलाई शेयरको मूल्य जतिजति बढ्दै जान्छ त्यति नै उसले तिरेको प्रिमियम मूल्य बढी हुन्छ र नाफा असीमित हुन जान्छ । त्यस्तै पुट वायरलाई पनि जतिजति शेयरको मूल्य घट्दै जान्छ त्यतित्यति नै प्रिमियमको मूल्य बढ्दै जाने हुँदा नाफा असीमित हुन्छ । घाटा भएमा सीमित (बढीमा उसले तिरेको प्रिमियम मूल्य मात्र) हुने र त्योभन्दा बढी बजार जति नै बढे पनि घटे पनि अप्शन वायरलाई घाटा हुँदैन । तर, अप्शन सेलरलाई चाहिँ घाटा भएमा असीमित घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।